Habeenka Mahadnaqa Iskaa wax u qabso ee Minnesota United FC - Cunnooyinka Ku Lugaha
Habeen Mahadnaq Iskaa wax u qabso ah oo ka socota Minnesota United FC
Cunnooyinka Lugaha ayaa ku martiqaadaya dhammaan mutadawiciinteenna iyo taageerayaasheena inay isu yimaadaan habeen farxad iyo kubbadda cagta ah Minnesota United FC 7da fiidnimo Sabtida, Julaay 11. Waxaan awoodnaa inaan bixino qaddar kooban oo ah tikidhada $5 (si joogto ah $20) oo qayb ka ah Cuntada Habeenkii Mahadnaqa Mutadawiciinta Wheels marka ay Minnesota United la ciyaareyso Ottawa Fury si loo furo qeybta labaad ee xilli ciyaareedkooda. Xarunta Isboortiga Qaranka ee Blaine.
Waxaan haynaa tiro aad u xaddidan oo tikidhada $5 ah oo markay baxaan, ay baxaan. Intaas ka dib, waxaan heysanaa lambar xayeysiis ah oo kuu oggolaanaya inaad tikidhada ku iibsato qiimo jaban. Cusboonaysiinta: Tikidhada $5 waa la iibiyay Si aad u hesho dalab gaar ah, ku qor lambarka xayeysiinta "CUNOOYINKA" bogga tigidhada ee Minnesota United oo waxaa lagugu jiidi doonaa sicir-dhimista tikidhada $12 (si joogto ah $15) qaybta geeska.
Waxaa jiri doona tanaasul, iyo fursado dabada laga riixo ciyaarta kahor! Ka baro wax badan oo ku saabsan dhacdada boggayaga bogga dhacdo ama tikidhada halkan ka iibso. Waxaan rajeyneynaa inaan kugu aragno Blaine July 11!